Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro 8.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ဗြီဒီယို ပေလယာမ်ား & အယ္ဒီတာမ်ား Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro
Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, Apps ကပ, မက်ဆေ့ခ်ျ, သင့်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Hide ။ လုံးဝအခမဲ့နှင့် Unlimited
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြခန်းကနေဓါတ်ပုံ & ဗီဒီယိုများ Hide နဲ့အလွယ်တကူလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု PIN ကုဒ်သုံးပြီးသူတို့ကိုရယူသုံးပါ။ အခုဆိုရင်သင်အလွယ်တကူ privacy ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
- app ကိုအကြောင်း -
ဒီ app ပါးန App ကိုအံဆွဲမီနူးထဲမှာ "ပေး Audio Manager ကို" အဖြစ််၏ဖြစ်ပါတယ်။
တက်နှင့်ဆင်း volumes ကိုဖွင့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်တစ်ဦးပေး Audio Manager က app ကိုအဖြစ်သူ့ဟာသူကိုဖုံးကွယ်။ ဒါပေမယ့်အသံ Manager ကိုခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်သင်လျှင် Long ကစာနယ်ဇင်းဒါဟာ Pro ကို app ကိုအခြေခံအားဖြင့်ဝှက်ထားသောဓာတ်ပုံများသင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် Vault ဖြစ်သော, ဗီဒီယိုများ, မက်ဆေ့ခ်ျများ, apps များစသည်တို့ကိုဖြန့်ချိမည်အမှန်တကယ်ဝှက်
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိက Vault အတွက်ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, သို့မဟုတ်အခြားဖိုင်တွေ Hide နိုင်ပါတယ်
1. ) အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ပေး Audio Manager ကိုနောက်ကွယ်မှ်၏ App ကို (စသည်တို့ကို Calculator ကိုတူသောအခြားအသှငျပွောငျးရရှိနိုင်ပါ)
2. ) သင့်ရွေးချယ်မှုဝှက်ထားသောဖိုလ်ဒါသို့မီဒီယာအမျိုးအစားသတ်မှတ်
3. ) အခမဲ့မိုးတိမ်အရံသိမ်းဆည်း သင့်ရဲ့ဖိုင်များကို
4. ) App ကို ခြေရာခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, မကြာသေးမီ apps များစာရင်းထဲကပျောက်ကွယ်သွား
5. ) ဘက်ပေါင်းစုံစလိုက်ရှိုးတွေနဲ့ပြခန်းနှင့် WhatsApp ကို, WeChat, Facebook, စသည်တို့ကိုမှမျှဝေ
VLC ကကစားသမား, MPlayerX စသည်တို့ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် 6. ) ပေါင်းစည်းဗီဒီယိုကစားသမား
7. ) အကွိမျမြားစှာသော့ခတ်မျက်နှာပြင် options များ - Pin, Password ကို, Pattern ကို
8. ) လက်ဗွေသော့ဖွင့်
သင်တို့ကိုဘမ်းရသည့်အခါ 9. ) ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် pin ကို / password ကို Escape
10. ) သင့်အရေးအပါဆုံးဖိုင်များကိုလုံခြုံမှစာဝှက်ပေးတဲ့ကိရိယာအတွက် Built
11. ) လျှို့ဝှက်ချက်စကားပြောခန်း, ပုဂ္ဂလိက Messaging ကို / ခေါ်ဆိုမှုများ, ပုဂ္ဂလိက Browsing, သော့ Apps ကပတူ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ။
12. ) ဝှက် app ကိုအိုင်ကွန် ဖုန်းရဲ့ app ကိုအံဆွဲထဲကနေ
အဲဒီမှာထုံးစံဆလိုက်ရှိုးများကဲ့သို့အများကြီးပို features တွေ, ရှယ်ယာ, အသုတ်သင်ဖျက်ပစ်ဖြစ်ကြ၏ unhide, အယ်လ်ဘမ်အကြား data ကိုရွှေ့, သင့်အကြိုက်စတာတွေမှဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲ sort
app ကို 99% ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးပြန်လည် install ပြုလုပ်, ပြုပါစနစ်တကျ install မပါဘူးဆိုရင်, သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများရှိကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ ကျေးဇူးပြု.
Facebook မှာ: fb.com/hideitpro
Web ကို: http://hideitpro.com
PC ကွန်ပျူတာ / Mac အတွက် Download
Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro အား အခ်က္ျပပါ
ronald-jeremy စတိုး 1.05k 343.92k
Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.1
ထုတ်လုပ်သူ ANUJ TENANI
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://hideitpro.com/privacy_policy.html
App Name: Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro
Release date: 2019-09-07 19:47:01
လက်မှတ် SHA1: A5:E5:71:87:99:4A:E9:D5:A5:C5:D0:1E:1F:C5:A0:2E:87:23:FB:8A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Anuj Tenani
Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ